Xidid BQ Aquaris 5,7 "10 ilbidhiqsi | Androidsis
Francisco Ruiz | | Xididka Android, Bq
Casharradan soo socda ee wax ku oolka ah, waa hagaag, in haddii loogu yeeri karo taas oo la siin karo fudeydka xad-dhaafka ah ee geeddi-socodka! habka ugu fudud ee xididka Bq Aquaris 5,7 ″ kaliya 10 ilbidhiqsi iyo iyada oo aan loo baahnayn in la raaco casharro dhib badan oo khatar ah, ama baahida loo qabo kombuyuutar shaqsiyeed oo loogu talagalay hawsha, kaliya iyada oo la adeegsanayo terminaalkeenna iyo xiriir firfircoon oo internet ah oo xog ama Wifi ah
Kahor intaadan sii wadin waa inaad taas ogaataa hal mar hel marin xidid qalabkaaga, waxaad heli doontaa dhammaan faylasha nidaamka, tan waxaad u baahan doontaa oo keliya soo dejiso sahamisa faylka xididka sida ES File Explorer. Marin u heliddu way fiicnaan doontaa helitaanka dhammaan nidaamkaaga qalliinka iyo faylalka muhiimka ah, iyo sidoo kale inaad adeegsan karto barnaamijyada ama qalabka nidaamka u baahan oggolaanshaha Super user. Helitaan kuu oggolaanaya adiga gab daaqada BQ dami laakiin taasi waxay khatar ku noqon kartaa dadka isticmaala layliska ama kuwa aan wax badan fahmin, maadaama sida aan kaaga sheego qof kasta oo ka mid ah faylalka sahamiya aan awoodi doonno tirtir faylasha ama tusaha lama huraanka u ah muhiimna u ah shaqeynta saxda ah ee terminalkeena iyo nidaamkaaga hawlgalka. Taasi waa sababta talo ahaan ay tahay inaad aad uga taxaddarto ka hor intaadan tirtirin fayl kasta oo ka imanaya boosteejadaada haddii aad tahay isticmaale Root.
1 Maxaan ku helaa Xididdada Bq Aquaris 5,7 ″?
2 Sida loo xidido Bq Aquaris 5,7 ″ 10 ilbidhiqsi iyo PC la'aan
Maxaan ku helaa Xididdada Bq Aquaris 5,7 ″?
Jawaabtu waa mid aad u fudud oo waxaan horey ugu siiyay qayb ahaan cutubka kore. Markaan soo afjarno terminal-ka Android waxaan u oggolaan doonnaa gelitaanka dhammaan faylasha nidaamka iyadoo la soo degsan karo fudud ee sahamiyaha faylka Root ee loogu talagalay Android. Intaa waxaa sii dheer, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan rakibno codsiyo iyo aalado nidaam ah oo naga caawin doona inaan kor u qaadno terminaalka, hagaajino, ka dhigno mid dhakhso leh ama xitaa inaad awood u yeelato inaad bedesho Soo-celinta asalka ah ee soo-kabashada cusub ee wax laga beddelay, kaas oo aan ka awoodi doonno inaan ku sameyno waxyaabo xiiso leh sida keyd ama Nandroid backup dhammaan nidaamkayaga hawlgalka.
Waxa intaa dheer oo dhan oo aan ahayn xab-xabbo turkey, waxaan sidoo kale awood u yeelan doonnaa, haddii ay dhacdo inaan beddelno soo-kabashada caadiga ah ee soo-kabashadaan cusub ee wax laga beddelay ee aan ka hadlayo, toosh Roms ka ugu fiican ee la kariyey, qaar ka mid ah romers-ka oo aan ka heli doonno kulammada kaladuwan ee horumarinta ee Android oo aan ku hagaajin doonno waxqabadka iyo xawaaraha dhaqaalahan xasaasiga ah ee Phablet illaa ugu badnaan meesha ay ka jiraan.
Halkaan waxaan kaa bari doonaa cashar kale, sida loo rakibo Soo-kabashada wax laga badalay mar haddii aan xididkii dhamayno, waana soo bandhigi doonaa Roms-ka ugu fiican ee loogu talagalay BQ Aquaris 5,7 ″ si joogto ah, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad la socotid Androidsis.
Sida loo xidido Bq Aquaris 5,7 ″ 10 ilbidhiqsi iyo PC la'aan
para Xididka Bq Aquaris 5,7 ″ waxaan kaliya u leeyihiin in ay soo bixi version ugu dambeeyay ee Framarrot, nooc ka mid ah waqtiga qorista qoraalkan ay marayaan 1.9.3 version. Marka codsiga la soo dejiyo, wax aan ka qaban karno isla isla xiriiriyahan, waxaan sii wadaynaa inaan ku rakibo, tan awgeed waxay ku filnaan doontaa inaad gujiso ogeysiiska soo dejinta dhammaaday, haddii, waa inaan hubin ka hor dejimaha barnaamijkeenna Android, inaan haysanno rukhsad lagu rakibo barnaamijyada laga helo ilo aan la aqoon. Waxaan awoodi doonnaa inaan ka helno doorashadan gudaheeda Dejinta / amniga.
Marka aan rakibno waan fulinaynaa waxaanan arki doonaa shaashad dhowr ikhtiyaar ah oo aan kala dooran karno, waxa ugu horreeya ee aan sameyno waa xulashada ikhtiyaarka Ku rakib SuperSu ama Ku rakib Superuser ka dibna riix mid ka mid ah Xididnimada ka faaiidaysiga Taasi waxay ka muuqaneysaa hoosta illaa aan ka helno ereyga Success!. Xaaladdayda gaarka ah, ka faa'iideysiga ayaa loogu yeeray Baahir.
Marka tan la sameeyo, xusuusnow in eraygu yahay inuu muuqdo Success!, intaas uun baan heleynaa dami oo geli Bq Aquaris 5,7 ″ inaad ku raaxeysato dhammaan faa'iidooyinka noqoshada isticmaale Root.
Dhawaan, cashar kale oo aad u fudud oo la raaco, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo beddel dib u soo kabashada asalka ah ee soo kabashada wax laga beddelay taas oo, tusaale ahaan, aan awood u yeelan doonno inaan ku shubno Roms la kariyey.
Soo dejiso - Framarrot 1.9.3.apk, muraayad
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » Sida loo xidido Bq Aquaris 5,7 ″ 10 ilbidhiqsi